Maticha eSadc batanai: Dokora
You are at:Home»Blogs»Denhe Reruzivo»Maticha eSadc batanai: Dokora
By Daphne Machiri on	 January 6, 2017 · Denhe Reruzivo
GURUKOTA redzidzo yepuraimari nesekondari, Dr Lazarus Dokora, vanoti zvakakosha kusimbaradza mitemo inokurudzira mushandirapamwe pakati pevararidzi vemudunhu reSadc munyaya dzekusimudzira dzidzo.
Vachitaura pakuparurwa kwemusangano weSouthern Africa Regional Meeting on Teacher Policies and Standards muHarare pakupera kwegore radarika, Dr Dokora vanoti mushandirapamwe pakati pevadzidzisi vemudunhu iri unobatsira zvikuru pakuvandudza fundo.
“Kushanda kwevadzidzisi kunofanirwa kuve kuri padanho repamusoro, naizvozvo misangano yakaita seiyi inobatsira mukuvandudza dzidzo,” vanodaro Dr Dokora.
Vakatorawo mukana uyu kuzivisa nhengo dzaive pamusangano uyu – idzo dzakabva kunyika dzinosanganisira Namibia, Botswana, South Africa neMozambique – nezvegwaro idzva redzidzo remuZimbabwe rinodaidzwa kuti New Education Cirruculum.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, Sadc Secretariat Senior Programmes Officer for Education and Skills Development, Lomthandazo Mavimbela, vanoti musangano uyu une donzvo rekuvandudza nekusimbisa mitemo inofanirwa kutevedzwa nevarairidzi mukuita basa ravo.
VaClementine Garises, avo vaive vakamirira Namibia, vanoti misangano yakadai inovapa mukana wekudzidza zvakawanda pamusoro pekusimudzira dzidzo kunyika kwavo.
“Uyu mukana watawana uchatibatsira kuti tikwanisewo kuona matakasarira maererano nedzidzo,” vakadaro VaGarises.
Munyori wemabhuku otsvaga rubatsiro
Ini ndapfidza nenjovhera